Beenaale Daahir Calasaw (waagacusub.com) oo daadku qaadey kadib markii uu daan daansaday warbaahinta xortaa ee xaqiiqada tatbisa. War Deg Deg ah: Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin oo Jihooyin kala gedisan kasoo galay magaalada Dhoobleey iyo Gaadiid ay ka carareen Maleeshiyadii Axmed Madoobe oo laga heley Howdka Dhoobleey. SomaliMeMo oo heshay shax Milateri oo ay dejisay AMISOM si ay ugu qabsato magaalada Muqdisho iyo ciidamo taabacsan DKMG-ka oo si qarsoodi ah ku jooga deegaanada ay Mujaahidiintu ka maamulaan magaalada Muqdisho.(Warbixin dheer oo Xasaasi ah).	Mu'assasada Al-Kataaib oo soo saartay filim cusub oo heer sare ah kana waramaya dagaalladii ugu dambeeyay Muqdisho. Amiirka Mujaahidiinta Al-shabaab Sh.Mukhtaar Abu-Zubayr Allaah Dhowree oo ka hadley Somaliland.	Jamaacada Ictisaam iyo Jalaafaynta Jihaadka.(Tariikhda Madaw ee Ictisaam). Sheikh Cumar Faaruuq Shalay Iyo Maantay Iyo C/laahi Yusuf Iyo Sheikh Sharif (Dhagayso)	Amiirka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa fariin soo diray oo kaga hadlaayo qaraxyadii barakaysnaa ee ka dhacay magaalada kampala ee dalka uganda.(DHAGAYSO)	Sh.Usama”Cadaalada ka mid ma’ahan in Ameerikaanku ku Noolaadaan Baraare iyada oo ay Walaalaheena Gaza ku jiraan Nolol Rafaad badan”.	Xarakatu shabaabul mujaahidiin oo faahfaahisay camaliyadii Istish-haadiga ee Lagu Halaagay Saliibiyiinta AMISOM (DAAWO SAWIRADA)	Calamada Ilmoland – England, Scotland, Finland, Iceland,Switzerland, Somaliland, & Puntland – oo kan Puntland ugu Foolxun Yahay!.
Posted on December 31, 2009 by halganka	Ilaah baa mahad leh. Nabadgelyo iyo naxariis nabi Muxamed korkiisa ha ahaato.
Waddamaas reer Yurub oo kore waxay ku kalsoon yihiin calankooda. Sida Shabaabka u wato calan madoow oo Towxiid ku qoranyahay ayey iyaguna hal midab iyo Laanqeyrta Kiristaanka ku kaaftoomeen marka laga reebo Iceland oo labo Laanqeyr oo midi caddahay is dhexgelisay. Qofkii sameeyey calanka Somaliland waa ku kaaftoomi waayey Towxiidka. Waxay keeneen xiddig madow iyo midabbo seddex ah. Ma weydiin waxay ka wadaan laakiin waxaan qiyaasayaa inay dhihi doonaan hadaladdii caanka ahaa sida: cagaarka waxaa laga wadaa barwaaqo. Caddaanka: nabad. Guduudka/casaanka: dhiig baa loo soo daadiyey sida SNM! Saan horay u sheegay, Towxiidkii waxaa la dhigay meel uusan u qalmin. Marka wax la isku qaso faa’iido ma keenaan. Marka gaaladii waxay ku ekaatay Laanqeyrtooda laakiin Somaliland waa ku filnaanwaayey Towxiidkii! Sida Puntland macageedu ugu liito ayaa calankeedu u liitaa. Bal hoos ka eeg: PUNTLAND
Mar kale waa taan niri waddamadaas Yurub waa ku qanceen Macatabkooda ama Laanqeyrtooda. Somaliland wax bay isku qaseen halka Puntland ka raadgateen Towxiidkii. Calankaan horteenna ka muuqda wax raad ah oo diin ku shaqo leh laguma arko. Iskadaa Towxiidkiiye waxay xitaa yareeyeen calankii Soomaalidu samaysatay. Inkastoo xiddigta caddeeyeen waxay kan Somaliland la qeybsadeen midab cad iyo mid cagaaran. Waxaan filayaa inay sida kale ka wadaan waxaan horay u xusnay. Gaal dil gartiisana sii! Calamada waddamaas Yurub waa ka macquulsan yihiin kan Puntland iyo waliba kan Soomaaliya! Sabab? Iyagu waxay Macatabka ka wadaan arrin diimeed oo intooda badan la xiriira dagaal ay u galeen inay difaacdaan waxay aamisnanyihiin iyo dalkooda. Markaad akhriso sababta ay astaan uga dhigteen Mucatabka/Laanqeyrta ayaad ogaan doonnaa. Nasiibdarro, Gaaladu waxay leeyihiin Laanqeyrta Cas halka innagu aynnu leennahay Bisha Cas! Labada sanam, waxaa macquulsan kan gaalada!.
Filed under: Uncategorized « Maamulka Islaamiga ah ee Wilaayaadka Bay iyo Bakool oo Degmada Ufurow ku qabtay Munaasabad ay boqollaal qof ka soo qeybgaleen iyo Dhoolatus Milatari oo lagu soo bandhigay Munaasabaddaas. Camal Istish-haadi ay Ku Bakhtiyeen 16 Mukhaabaraadka CIA-da Marekanka »